Maxay ku saabsanaan doontaa khubadda Farmaajo uu ka jeedin doono shirweynaha Carabta? - Caasimada Online
Home Warar Maxay ku saabsanaan doontaa khubadda Farmaajo uu ka jeedin doono shirweynaha Carabta?
Maxay ku saabsanaan doontaa khubadda Farmaajo uu ka jeedin doono shirweynaha Carabta?
Dammaam (Caasimadda Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shalay gaaray Magaalada Dammaam ee dalka Sucuudiga ayaa lagu waddaa in uu maanta Khudbad ka jeediyo Shirka 29aad ee madaxda waddamada ku mideysan Ururka Jaamacadda Carabta.
Madaxweynaha DFS, Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa la filayaa inuu Kulankaasi ka jeediyo Khubad uu kaga hadlayo Arrimaha Siyaasadda iyo Ammaanka Somalia iyo Aragtida DFS ee Xiisadaha ka aloosan Dunida Carabta,
Kulanka Jaamacadda Carabta ayaa sanad kasta waxaa looga hadli jiray Xaaladda Soomaaliya balse waxaa muuqato in labadii shir ee lasoo dhaafay in looga hadlayo Qidiyadaha wadamo kale oo Carbeed sida Falastiin, Siiriya iyo Ciraaq, waxayna taas muujineysaa in Soomaaliya ay xaalad dagan ku jirto.
Dowladda Soomaaliya ayaa soo marta xaalado kala duwan, waxayna hadda joogtaa meel aad u sareyso wuuxuna dalka leeyahay dowlad rasmi ah halkii uu markii hore ka lahaan jiray dowlado kumeel gaar ah.